▄ နန္ဒာသိန်းဇံ၏ သွန်သင်ချက် – Min Thayt
Literature Papers PDF Download Sketchiography
ကျနော်ဟာ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံရဲ့ ဘဝရုပ်ပုံလွှာကို ရေးချင်ပေမယ့်၊ ရေးလို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ အကြောင်းမှာ၊ ဆရာ့ ဘဝထက် ဆရာ့ စာပေကိုသာ ကျနော်ဟာ လေ့လာခွင့်ရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီဆောင်းပါးဟာ၊ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံရဲ့ စာပေရုပ်ပုံလွှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံရဲ့ စာပေဝိညာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံ ရဲ့ စာပေအားဖြင့် သွန်သင်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံဟာ သူရေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့ လူထုကို ဘယ်လိုသွန်သင်ပါသလဲ။ (တနည်း) စာဖတ်သူကို ဘယ်လို သွန်သင်ပါသလဲ။
စာရေးဆရာ / စာအုပ် / စကားလုံး
စာအုပ်တွေဟာ စာရေးဆရာရဲ့ တမန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေထဲမှာ စာရေးဆရာရဲ့ အဇ္ဈတ္တနဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်ဟာ သက်ဝင်မြုပ်နှံခြင်းခံရပါတယ်။ ဒီတော့ စာရေးဆရာ ကွယ်လွန်သည့်တိုင် စာရေးဆရာဟာ မသေဆုံးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့၊ စာအုပ်တွေဟာ စာရေးဆရာ ကိုယ်စားအလုပ်လုပ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ လောကမှာ ဖြစ်ရပ်တွေဟာ သူ့သဘောသူဆောင်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေဟာလည်း သူ့သဘောသူဆောင်ပါ တယ်။ စာအုပ်တွေရဲ့ သဘောဟာ ဘာပါလဲ။
စာအုပ်တွေရဲ့သဘောဟာ…. စာရေးဆရာရဲ့ သဘောပါပဲ။ အကြောင်းအားဖြင့်၊ စာရေးဆရာ ယုံကြည်မြုပ်နှံခဲ့ တဲ့ စိတ်အစဉ်ရဲ့ မှတ်တမ်းဖြတ်သန်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးဆရာဟာ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ဖို့ စကားလုံးတွေ၊ ဝေါဟာရတွေ၊ ဝါကျတွေနဲ့ တွဲဖက် က,ခုန်ရပါတယ်။ ဘယ်လိုသော အကြောင်းအရာတွေဟာ စာရေးဆရာရဲ့ စကားလုံးဖြစ်လာပါသလဲ။ အကြောင်းအရာတွေကို ကြည့်ခြင်း၊ လေ့လာခြင်းအားဖြင့် စာရေးဆရာရဲ့ စိတ်မြင် ကွင်းနဲ့ ဆန္ဒမြင်ကွင်းကို နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ထိုနည်းလည်းကောင်း စကားလုံးတွေရဲ့ အတိုင်းအဆကို နား လည်ရင် စာရေးဆရာရဲ့ စိတ်ကို နားလည်တာပါပဲ။
• ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံဟာ ဘယ်စိတ်နဲ့ စာကို ရေးခဲ့ပါသလဲ။
• ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံဟာ ဘယ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စာကို ရေးခဲ့ပါသလဲ။
• ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံဟာ ဘယ်အကြောင်းအရာအပေါ်မှာ စိတ်အာရုံ စွဲမြဲခဲ့ပါသလဲ။
• ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံဟာ စာဖတ်သူ လူထုအပေါ် ဘယ်လိုစေတနာ ထားခဲ့ပါသလဲ။
စာရေးဆရာရဲ့ စာ၊ စာရေးဆရာရဲ့ စာအုပ်၊ စာရေးဆရာရဲ့ စေတနာဟာ စာပေတန်ဖိုးကို ပြဌာန်းပါတယ်။ စာရေးဆရာ ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်ကို ပုံဖော်ထုဆစ်ပါတယ်။ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံ ကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ စာပေလုပ်ရပ်ဟာ ဘာတွေဖြစ်နိုင်ပါသလဲ…..။
ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံရဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ စာရေးသား သွန်သင်ချက်တွေဟာ ဆရာ့ရဲ့ အဇ္ဈတ္တပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒဿနိကဗေဒသမိုင်းကို လေ့လာရင်၊ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံရဲ့ ဘဝနဲ့ စာပေဟာ မလေ့လာလို့ မဖြစ် တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်ဟာ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံရဲ့ စာပေထဲကနေ၊ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒဿနဗေဒ သက်ဆင်းပုံ ကို လေ့လာခဲ့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့်၊ ဗုဒ္ဓဒဿနကနေ ဆင်းသက်တဲ့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အတွေးအခေါ်ကို နားလည်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဒဿနကို မြန်မာနားနဲ့ ကိုက်အောင်၊ မြန်မာ နှလုံးသားနဲ့ ကိုက်အောင်၊ မြန်မာ့ရေမြေနဲ့ ကိုက်အောင်၊ မြန်မာ့သွေးသားနဲ့ ကိုက်ညီအောင် သွန်သင်ပို့ချတာကို လည်း တွေ့ရပါတယ်။ ပါဠိပါတ်သားတွေ ဒင်းကြမ်းပြည့်နေတဲ့ ရှင်းပြပုံမျိုးနဲ့ မဟုတ်ဘဲနဲ့ မြန်မာစကားလုံး၊ ဝေါဟာရတွေကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ရေးသားတင်ပြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒါဟာ ဘာကိုပြသလဲဆိုရင်၊ ဗုဒ္ဓဒဿနကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ လူမှုယဉ်ကျေးမှုအတွေးအခေါ်ကို မြန်မာကိုယ် ပိုင်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာ ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံဟာ ဘုရင်တစ်ဆူလို့ ဆိုလောက်ပါရဲ့….။
ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံရဲ့ စာပေတွေကို လေ့လာချက်အရ၊ ဆရာဟာ ဗုဒ္ဓဒဿန (တနည်း) အရှေ့တိုင်းဒဿနဘက် ကို အတော်ယိမ်းတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။ အနောက်တိုင်းဒဿနတွေအကြောင်းကို တက္ကသိုလ် အဝန်း အဝိုင်း၊ စာသင်ခန်းထဲမှာ ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံဟာ ရှင်းလင်းသင်ကြားခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်… ကျနော်လေ့လာ တွေ့ရှိမှုအရ၊ အရှေ့တိုင်းဒဿနထဲမှာမှ ဗုဒ္ဓဒဿနကို စာပေအားဖြင့် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွန်သင်ပို့ချခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံရဲ့ စာတွေကို ဖတ်ရှုပြီးတော့၊ မြန်မာ့ ဒဿနရေခံမြေခံဟာ ဗုဒ္ဓဒဿနကနေ ဆင်းသက်လာပါ့လားလို့ နားလည်ရပါတယ်။ ထိုနည်းလည်း ကောင်း ဆက်စပ်နားလည်လာတွေကတော့…၊ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အတွေးအခေါ် အုတ်မြစ်ကို ဆုပ်မိ ကိုင်မိနားလည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံကို ဦးခိုက်မိပါရဲ့….။
ဒဿနပိုင်းဟာ ကိုယ်ကျင့်ဒဿနနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ နားလည်မိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ကျင့်တရား ဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်တွေကို ဗုဒ္ဓသွန်သင်ချက်တွေထဲကနေ ထုတ်နှုတ်ပြီးတော့၊ မြန်မာ့ဒဿနအဖြင့် ရှင်းလင်း တင်ပြချက်တွေဟာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ရပါတယ်။ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲက ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှု ဒဿနတွေကို လေ့လာဖို့ ဆိုရင် ကျနော်ကတော့ ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံကို ညွှန်းဆိုမိမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့တွေဟာ ဗုဒ္ဓရဲ့ သွန်သင်ချက်တွေကို လူမှုဒဿနအားဖြင့်၊ လူမှုယဉ်ကျေးမှုအားဖြင့်၊ လူမှုဓလေ့အားဖြင့် ဘယ်လို လက်ခံကျင့်သုံးနားလည်ထားပါသလဲ။ ဒီအဖြေဟာ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံရဲ့ စာပေတွေထဲမှာ ရှိနေပါ တယ်။ မြင်ကွင်းကျယ်ကျယ်နဲ့ တစိုက်မတ်မတ် လေ့လာမှုရှိဖို့သာ လိုပါတယ်။
လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ဘဝဒဿနဆိုင်ရာ အမြင်တွေ ရှိနေပါတယ်။ ကျနော်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝဒဿနကို စွဲထုတ်ဖို့ အတွက် ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံရဲ့ စာပေတွေကို အသုံးချခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်ဟာ မြန်မာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်ဟာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်ဟာ မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့တွေကို စိတ်ဝင်တစားလေ့လာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနည်းလည်းကောင်း၊ မြန်မာလူထုရဲ့ အကျင့်စရိုက်နဲ့ အပြုအမူ၊ အတွေးအခေါ်တွေကို ဝေဖန်စောကြောတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ ရေးတဲ့ စာရေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓသွန်သင်တဲ့ ဝိဘဇ္ဇဝါဒ အရ၊ ဝေဖန်ပိုင်းခြားစိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်းမှာ စံပေတံ၊ နှုန်းစံတန်ဖိုး၊ အခြေခံတန်ဖိုး တစ်ခု ခုတော့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ဘယ်က ရပါသလဲ။ ကျနော် ဗုဒ္ဓဒဿနတွေဆီက ရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဒဿနကို မြန်မာလို ဂဃနဏ နားလည်ဖို့ ဖတ်ရတဲ့ စာအုပ်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲသည့်အထဲမှာ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံ ရဲ့ စာပေတွေဟာ အုံလိုက်ကျင်းလိုက်၊ ထုလိုက်ထည်လိုက် ရှိနေပါတယ်။ ကျနော့်အတွက် ရတနာသိုက်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ “ထို့အတွက် ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံအား ဦးခိုက်ပါ၏…”
ရိုးရှင်းသော၊ ရှင်းလင်းသော၊ ရိုးသားသော၊ ထောက်မနေသော၊ တောင့်မနေသော၊ နားကန့်လန့်မနေသော၊ မျက်စိကန့်လန့်မနေသော အရေးအသားတွေကို ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံစာပေတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ အကြောင်း အရာအားဖြင့် နက်နဲသော ဒဿနိကဗေဒကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူ၍ မြင်နိုင်တွေးခေါ်ဖြန့်ကျက်နိုင်အောင် ရေးသား ရာမှာ ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံရဲ့ ရေးသားချက်တွေကို တွေ့ရပါတယ်။
ဘဝအတွေးအခေါ်ကို ပမာပုံဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ထောင့်ပေါင်းစုံက ရှင်းလင်းရေးသားထားတာကို ကျနော် ဖတ်ရပါတယ်။ ပမာပုံဆောင်ချက်များဟာ ဘယ်လောက် မြန်မာဆန်သလဲ။ ဘယ်လောက် မြန်မာဆန်လိုက် သလဲ။ မြန်မာမှု ဒဿနရှုထောင့်ကနေ ပို့ချတဲ့နေရာမှာ၊ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံရဲ့ သွန်သင်ချက်တွေဟာ အတော် ထိရောက်ပါတယ်။ မြန်မာ့ရေမြေဓာတ်ဟာ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံရဲ့ အသွေးအသားထဲမှာ စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့ပြီးဖြစ်ပါလိမ့် မယ်။
နောက်ထပ် ထူးခြားတာ ရှိပါသေးတယ်။ မြန်မာစာပေမှာ တွေ့ရခဲတဲ့အကြောင်းရပ်မျိုးကို ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံရဲ့ စာပေထဲမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ၎င်းမှာ၊ “Symbolism” ဖြစ်ပါတယ်။ အသွင်သဏ္ဍာန်တို့၏ အနှစ်သာရလို့ နားလည် လို့ ရပါတယ်။ အသွင်သဏ္ဍာန်တို့နောက်ကွယ်က ဒဿနတရားဖြစ်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုအားဖြင့် သိမှတ် လက်ခံ ပုံဖော်တည်ဆောက်ထားတဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန်တွေဟာ ဘယ်လို အနက်သဘော၊ ဘယ်လို အနှစ်သာရ၊ ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်မျိုးကို ဆောင်ယူနေပါသလဲ။ လူမှုဘဝထဲမှာ တွေ့ရတဲ့၊ သဘာဝထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အသွင် သဏ္ဍာန်တွေဟာ ဘဝဒဿနကို ဆောင်ယူတဲ့ အနှစ်အသားတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီရှင်းလင်းချက်ကို ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံက ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာရေးသားခဲ့တဲ့ “ကြာ၊ အသွင်သဏ္ဍာန်တို့၏ နောက်ကွယ်၌၊ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနှင့် ခရီးသွားခြင်း၊ တွေးချိန်ချင့်စရာ” …. စတဲ့ စာအုပ်တွေမှာ symbolism ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ တခြားသော စာအုပ်တွေမှာလည်း ပါဝင်နေပါသေးတယ်။
အမှတ်အသားအသွင်သဏ္ဍာန်တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဒဿနတွေ ကိန်းဝပ်နေတာကို သတိထားမိပြီး၊ ဘဝ ဒဿနအဖြစ် ဆင်ခြင်ဖို့ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံက သွန်သင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ကျနော့်အတွက် ဒီအချက်တစ်ခုဟာ မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်နေပါတယ်။
ကျနော့် မြင်ကွင်းထဲမှာ ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံရဲ့ စာပေတွေထဲက သွန်သင်ချက်တွေကို ဖတ်ပြီးတော့၊ ကျနော်ဟာ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံရဲ့ ရုပ်ပုံလွှာကို ထုဆစ်ကြည့်နေမိပါတယ်။
• ဖီလိုဆိုဖီ ပါမောက္ခ
• အတွေးအခေါ် လမ်းပြသွန်သင်သူ
• အတွေးအခေါ်တို့၏ လေ့လာရာ၊ ကျက်စားရာ၊ ရှင်သန်ရာ၊ ကြီးပွားရာ ရေခံမြေခံကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ၊ “အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ” ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ရှင်းလင်းချင်ပါတယ်။ ကျနော့်ဆိုလိုချက်မှာ၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၄) ရက်နေ့မှာ ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံ (ပါမောက္ခဒေါက်တာသိန်းဇံ) မြန်မာနိုင်ငံတော်က ချီးမြှင့်တဲ့ သာသနာပြုဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ “မဟာသဒ္ဓမ္မ ဇောတိကဓဇ” ဘွဲ့ကို ညွှန်းဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုန်းတော်ကြီး၊ ဆရာတော်ကြီးတွေကို ဆက်ကပ်တဲ့ “အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ” ဘွဲ့ကိုလည်း ညွှန်းဆိုတာမဟုတ်ပါ ဘူး။ “ပညာ့အကြီးအမှူး” “ပညာ့ထွဋ်ခေါင်” “မဟာ့မဟာ ပညာရှိ” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတဘွဲ့ကို ကျနော်ဟာ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံရဲ့ ရုပ်ပုံလွှာမှာ၊ ကျနော့်အတ္တနောမတိအရ ပုံဖော်ယူဆထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံဟာ ပဲခူးတိုင်း ပေါင်းတည်ဇာတိဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မပြီးချင် တစ်နှစ်အလိုလောက် မှာ၊ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံကို မွေးဖွားပါတယ်။ အမည်ရင်းက သိန်းဇံ ဖြစ်ပါတယ်။ တော်လှန်ရေးကောင်စီ အာဏာ သိမ်းတဲ့နှစ်၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပါတယ်။ နောက်လေးနှစ်အကြာ၊ ၁၉၆၆ ခုနှစ်မှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေ ဒဿနိကဗေဒနဲ့ ဘွဲ့ရပါတယ်။ နောက်ထပ် နှစ်နှစ်အကြာ၊ ၁၉၆၈ ခုနှစ်မှာ မဟာဝိဇ္ဇာ ဘွဲ့ကို ထပ်မံ ရရှိပါတယ်။ မောင်သိန်းဇံ၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့အတွက် တင်သွင်းခဲ့တဲ့ ကျမ်းဟာ “ဘဝအဓိပ္ပါယ်နှင့် ဘဝသစ္စာ” ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျမ်းကို အများပြည်သူ ဖတ်ရှုနိုင်အောင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပုံနှိပ် ခုနှစ်က ၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ မေလဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျမ်းကို အများပြည်သူဖတ်ဖို့ ပုံနှိပ်တဲ့အခါ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဒဿနိကဗေဒ အငြိမ်းစားပါမောက္ခ ဦးဖေအောင်က “နောင် ဗုဒ္ဓဒေသနာကို လေ့လာလိုက်စားလိုကြသော ခေတ်ပညာရှင်များအတွက် လမ်းစဖော်ပေးသောကျမ်းတစ်စောင် အနေနဲ့ ရပ်တည်နေမည်” လို့ မှတ်ချက်ပေး ပါတယ်။ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံဟာ မဟာဝိဇ္ဇာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမှာ၊ ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုဘာသာရပ် အထူးပြု လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်း၊ ဗုဒ္ဓဒဿနနဲ့ ဗုဒ္ဓသွန်သင်ချက်တွေအရ ဆင်းသက်လာတဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဒဿနနဲ့ လူမှုဒဿနတွေကို အရေးအသားများပြားခဲ့ပါတယ်။ အနောက်တိုင်း ဒဿန တွေကို အရှေ့တိုင်းအမြင်နဲ့ ချည်းကပ်တဲ့နေရာမှာလည်း ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံရဲ့ စာပေတွေကို လေ့လာနိုင်ပါ လိမ့်မယ်။ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံဟာ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ၊ ၁၄ ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့) ဝါခေါင်လပြည့်နေ့ (မေတ္တာအခါတော်နေ့) မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
• စာအုပ်ဆိုတာ၊ စာရေးဆရာရဲ့ တမန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။
• စာပေဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ရုပ်ခန္ဓာအားဖြင့် ကွယ်လွန်သွားပေမယ့်၊ အခုအချိန်ထိ စာပေဝိညာဉ်အား ဖြင့် မသေဆုံးသေးပါဘူး။ မကွယ်လွန်သေးပါဘူး။ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံ ရေးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေဟာ စာရေးဆရာကိုယ်စား အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ နေ့စဉ်လိုလို အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ အချိန်တိုင်းလိုလို အလုပ် လုပ်နေပါတယ်။ အကြောင်းကတော့၊ စာအုပ်တွေဟာ စာရေးဆရာရဲ့ ဝိညာဉ်ကို သယ်သွားပြီး စာဖတ်သူ လူထု ဆီကို စာရေးဆရာရဲ့ တမန်တော်အသွင်နဲ့ ကျေးဇူးပြုနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံဟာ မသေဆုံးသေး ပါဘူး။
စာရေးဆရာဆိုတာ လူထုရဲ့ ပညာရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံဟာ တက္ကသိုလ်ပရဝုဏ်ထဲမှာပဲ၊ ဒဿနပညာတွေ ဖြန့်ချိခဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်၊ မြန်မာလူထုကြီး တစ်ရပ်လုံးအတွက် ဒဿနိကနယ်ပယ်မှာ လူထုပညာရေးမှူးအနေနဲ့ အလုပ်အကျွေးပြုခဲ့ပါတယ်။ စာပေအား ဖြင့်၊ လူထုကို ကျေးဇူးပြုခဲ့ပါတယ်။ စာရေးဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံအား ဒဿနိကနယ်ပယ်၏ လူထုပညာရေးမှူး အဖြစ် ကျနော် သိမှတ်လက်ခံပါ၏။
စာပေဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလူထုကို ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံဟာ ဗုဒ္ဓသွန်သင် ချက်တွေကနေတစ်ဆင့် ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုဒဿနကို သင်ကြားပို့ချခဲ့ပြီး၊ အနောက်တိုင်းဒဿနနဲ့ ယှဉ်တဲ့ အရှေ့ အတိုင်းအတွေးအခေါ်ကို ပို့ချသွန်သင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဒဿနရေခံမြေခံနဲ့ အတိတ်သမိုင်း ကို နားလည်စေခဲ့ပြီး၊ စာရေးသားခြင်းအားဖြင့် လူထုပညာရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဒဿနသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကြီး ကို၊ ရေးဆွဲပြဌာန်းခဲ့ပါတယ်။
ကျနော် တက္ကသိုလ် စတုတ္ထနှစ်ကျောင်းသား ဘဝ (၂၀၁၁ ခုနှစ်) မှာပဲ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံဟာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါ တယ်။ မျိုးဆက်ကွာဟမှုကြောင့် ကျနော်ဟာ ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံကို လူပုဂ္ဂိုလ်ချင်း တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မတွေ့ဆုံဖူး ပါ။ သို့သော် ကျနော်ဟာ စာသမားဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေထဲကနေ စာရေးဆရာ (စာရေးသူ) ရဲ့ အဇ္ဈတ္တနဲ့ ဝိညာဉ်ဓာတ်ကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံ ရေးသားခဲ့တဲ့ စာပေသွန်သင်ချက်တွေအရ ကျနော်ဟာ ဆရာ့ရဲ့ တမန်တော်တွေ ကျေးဇူးနဲ့ “နန္ဒာသိန်းဇံရဲ့ ဝိညာဉ်ဓာတ်” ကို ထိတွေ့ခံစားသိရှိရပါတယ်။ စာပေအား ဖြင့် ကျေးဇူးပြုခဲ့သော ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံအား အလေးအမြတ်ပြုပါ၏။
ည ၈း၅၅
၂၇ ၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၂၀။
• ကိုယ်ကျင့်တည်ကြည်ခြင်းနှင့် အဆင့်မြင့် ခရီးစဉ်၊ နန္ဒာသိန်းဇံ၊ အဌမကြိမ်၊ လှိုင်းသစ်စာပေ၊ ၂၀၁၈။
• ကြာ၊ နန္ဒာသိန်းဇံ၊ စတုတ္ထအကြိမ်၊ လှိုင်းသစ်စာပေ၊ ၂၀၁၇။
• ခရောင်းလမ်းကို ဖြတ်ကျော်ခြင်း၊ နန္ဒာသိန်းဇံ၊ စုဒ္ဒသမအကြိမ်၊ လှိုင်းသစ်စာပေ၊ ၂၀၁၈။
• စီးပွားရေးနှင့် စစ်ရေးဗျူဟာ၊ နန္ဒာသိန်းဇံ၊ စတုတ္ထအကြိမ်၊ လှိုင်းသစ်စာပေ၊ ၂၀၁၈။
• စိတ်အဆင့်ဆင့်မြင့်တက်ခြင်း သဘာဝ၊ နန္ဒာသိန်းဇံ၊ တတိယအကြိမ်၊ လှိုင်းသစ်စာပေ၊ ၂၀၁၈။
• တွေးချိန်ချင့်စရာ၊ နန္ဒာသိန်းဇံ၊ ပဉ္စမအကြိမ်၊ လှိုင်းသစ်စာပေ၊ ၂၀၁၇။
• တွေးမြင်ရနံ့တို့ ဝေ့ပျံ့နေဆဲ၊ နန္ဒာသိန်းဇံ၊ ပဉ္စမအကြိမ်၊ လှိုင်းသစ်စာပေ၊ ၂၀၁၉။
• ထေရဝါဒနှင့်ပတ်သက်သော မှတ်ချက်များ၊ နန္ဒာသိန်းဇံ၊ စတုတ္ထအကြိမ်၊ လှိုင်းသစ်စာပေ၊ ၂၀၁၉။
• နောင်တကင်းရာသို့၊ နန္ဒာသိန်းဇံ၊ စတုတ္ထအကြိမ်၊ လှိုင်းသစ်စာပေ၊ ၂၀၁၈။
• ပြောရင်း ပြောနေမည့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ နန္ဒာသိန်းဇံ၊ တတိယအကြိမ်၊ လှိုင်းသစ်စာပေ၊ ၂၀၁၈။
• ဖြေဆည်ရာ၊ နန္ဒာသိန်းဇံ၊ စတုတ္ထအကြိမ်၊ လှိုင်းသစ်စာပေ၊ ၂၀၁၇။
• ဘဝအဓိပ္ပါယ်နှင့် ဘဝသစ္စာ၊ နန္ဒာသိန်းဇံ၊ ပန္နရသကြိမ်၊ လှိုင်းသစ်စာပေ၊ ၂၀၁၈။
• မနက်ဖြန်များကို ဖြတ်သန်းနေသော စိတ်ကူးများ၊ နန္ဒာသိန်းဇံ၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ လှိုင်းသစ်စာပေ၊ ၂၀၁၇။
• မှန်သောစကားကို ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်သောမှတ်ချက်များ၊ နန္ဒာသိန်းဇံ၊ အဌမအကြိမ်၊ လှိုင်းသစ် စာပေ၊ ၂၀၁၇။
• မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနှင့် ခရီးသွားခြင်း၊ နန္ဒာသိန်းဇံ၊ ဆဌမအကြိမ်၊ လှိုင်းသစ်စာပေ၊ ၂၀၁၈။
• သမုဒ်ပင်လယ်ပြာ နှိုင်းပမာ၊ နန္ဒာသိန်းဇံ၊ တတိယအကြိမ်၊ လှိုင်းသစ်စာပေ၊ ၂၀၁၅။
• အတွေးအခေါ်တို့ လွင့်မျောခြင်းနှင့် လူ၏ဆောက်တည်ရာ၊ နန္ဒာသိန်းဇံ၊ သတ္တမကြိမ်၊ လှိုင်းသစ်စာပေ၊ ၂၀၁၇။
• အသွင်သဏ္ဍာန်တို့နောက်ကွယ်၌၊ နန္ဒာသိန်းဇံ၊ စတုတ္ထအကြိမ်၊ လှိုင်းသစ်စာပေ၊ ၂၀၁၆။
Tagged Buddhism, Literature, Myanmar Literature, Nandar Thein Zan, Philosophy, Sketch, Sketchiography
Previous post ▄ ဒီမိုကရေစီဉာဏ်သက်ရင့်လာပြီလား…..
Next post ▄ ကျနော် ဝေဖန်ရေးသမား ဟုတ် / မဟုတ်